फोटो फिचर – Page 217 – Etajakhabar
तीते करेलाको फाईदाहरु तथा बेफाईदाहरु कसले खान हुन्छ कसले हुँदैन जानी राखौं
ताजा खबर :- खाँदा तितो भएकाले नै धेरैले खान मन नपराउने तरकारीको रुपामा प्रयोग गर्ने तिते करेलाको फाइदा, बेफाइदाहरु लगायत कस्ता व्यक्तिहरुका लागि गुणकारी हुन्छ र कस्तालाई हानिकारक हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौ। तीते करेलाको फाईदाहरु खानामा रुचि बढाउँछ । तीतेकरेलाको पात पिसेर लेप बनाएर लगाएमा छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । पेटसफा राख्...
विहान खाली पेटमा पानी खाँदा हुने फाईदाबारे जानी राखौं
मानव जीवनका पानीको महत्व धेरै छ । हामी पानी त खान्छौं तर, विहान खाली पेटमा खाँदा निकै फाइदाजनक हुन्छ । यदि तपाइले विहानै पानी पिउने बानी पार्नुभयो भने विभिन्न रोगबाट बच्न सक्नुहुनेछ । खाली पेट पानी पिउँदा हाम्रो शरिरमा भएको टक्सिन सफा भई रगत शुद्ध बनाउँछ । बिहानै ४ गिलास पानी पिउन सके हामीलाई तन्दुरुस्ती प्राप्त हुन्छ । तपाई बिहानै यति धेरै पानी पिउन सक्नु हुन्न भने दैनिक १ गिलासबाट शुरु गर्नु...
भिटामिन “डी” को कमीले किड्नीलाई भयानक खतरा जानी राखौं
ताजा खबर नेपालगंज । आधुनिक शहरी जीवन शैलीले गर्दा धेरै संख्यामा मानिसहरु भिटामिन "डी"को समस्यामा जुधिरहेका छन् । खासगरी बच्चाका लागि भिटामिन "डी" को कमीले धेरै हानि गर्दछ । क्रोनिक किडनी डिजीज को समस्याबाट जुधिरहेका दुई तिहाई बच्चाहरुमा भिटामिन "डी" को कमी धेरै मात्रामा पाईयो यसको लागि १२ देशका ५०० बच्चामा अनुसन्धान गरिएको थियो । क्लीनिकल जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ने...
२०७३ साल श्रावण १८ गते मङ्गलवार हेर्नुहोस आजको पञ्चाङ्ग अनि राशिफल
हेल्लो शुभ बिहानी सबैलाई हेर्नुहोस आजको पञ्चाङ्ग अनि राशिफल श्रीसूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु,सौम्यनाम संवत्सर, शाके १९३८, विक्रसम्वत २०७३ साल श्रावण १८ गते मङ्गलवार नेपाल सम्बत ११३६ दिल्लागा,सन् २०१६ अगस्त २ तारिक कृष्णपक्ष औसी तिथि राती २ वजेर १२ मिनेटसम्म, तिष्य नक्षत्र राती २ वजेर ४८ मिनेटसम्म, सिद्धियोग राती ३ वजेर २० मिनेटसम्म, चतुष्पदकरण अपरान्ह २ वजेर ३६ मिनेटसम्म, आनन्दादियोग प्रवद्र्ध, सूर्...
काजुको सेवनले हुने फाईदाहरू जानी राखौं
ताजा खबर :- काजुमा मोनो स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ, जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ र मुटुरोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो कोलेस्टेरोलरहित हुन्छ । छालाका लागि पनि काजुलाई दूधमा रगडेर लगाउनाले सुन्दर र नरम हुन्छ । काजुको नियमितसेवनले कपाल झर्नबाट रोक्छ । यसमा सोडियम कम र पोटासियम बढी हुन्छ, जसले रक्तचाप पनि कम गर्छ । काजुमा एन्टी अक्सिडेन्ट, जस्तै, भिटामिन इ र सेलनियमन पनि पाइन्छ, जसले क्यान्सरबाट बचाउँछ ।...
विदेशमा हुनुहुन्छ ? कुनै अप्ठेरो पर्यो भने यसो गर्नुहोस
ताजा खबर काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपाली कामदारहरु गन्तव्य मुलुकमा गएर समस्या भोग्नु वा अलपत्र पर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा अनेक कारण दुःख भोग्ने र अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । म्यानपावर र दलालहरुले नक्कली भिसामा लगेर छोड्नेदेखि आश्वासन भन्दा फरक र जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाएका कारण धेरै नेपालीहरु विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । काम छोड्ने, ...
पहिरो भित्रबाट निस्कियो आवाज : ‘म ज्यूँदै छु, मलाई बचाऊ’ । यो भन्दा दुःख त अर्को के होला र !
ताजा खबर काठमाडौँ । बुधबारको रात, गर्ल्याम्म आवाजले उनीहरू निद्राबाट ब्युँझे। केही मेलोमेसो नपाउँदै माथिबाट टिनको छाना खसेर टाउकैमा बज्रियो। नानुमाया केसी देब्रे कोल्टे परेर सुतेकी थिइन्। टाउकोमा टिनको जस्ता र कुममा काठको दलिनले चेपेर उनी चलमलाउनधरि सकिनन्। उनले सँगै सुतेका आफ्ना पति नारायणलाई आवाज दिइन्। उताबाट सामसुम केही जवाफ आएन। नानुमायाको मन भक्कानियो। उनी ज्युँदै थिइन्, त्यो उनलाई थ...
तनावरहित वातावरणमा संभोग गर्नुका फाइदै फाइदा
एजेन्सी । तनाव कहीँ पनि राम्रो काम गर्दैन । तनावका कारण अन्य काममा त असर पुग्छ नै त्यस्तै असर देखिन्छ संभोगका क्रममा पनि । तनावले भरीएको वातावरण र समुयमा सेक्स गर्दा कुनै आनन्द नै हुँदैन । चिकित्सकहरुका अनुसार तनाव भुलाउन सेक्स गर्ने होइन, सेक्स गर्नुअघि तनाव विसर्जन गर्ने गर्नुस् । जागिर, व्यापार, घरायसीलगायत विभिन्न कुरा मनमा खेलाएर सेक्समा डुब्न सक्नुहुन्न । तनाव लिँदा शरीरमा कोर्टिसोलजस्...
यस्तो छ यसबर्षको उत्कृष्ट तस्विर, भूकम्प जाँदाजाँदै खिचिएको तस्विर ‘फोटो अफ द इयर–०७३’
काठमाडौँ, १४ साउन । ‘नेपाल फोटो प्रतियोगिता –२०७३’ को उपाधि दीपकरत्न वज्राचार्यले जित्नुभएको छ । उहाँले गत वर्ष वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदै गर्दा खिंचेको तस्बिर यस वर्षको ‘फोटो अफ द इयर –०७३’ घोषित भएको हो । फोटो पत्रकार (पिजे) क्लबको आयोजनामा आज यहाँ भएको कार्यक्रममा नभेष चित्रकारको तस्बिरले ‘नेपाल स्माइल’ विधा जित्यो भने ‘डेली लाइफ’ विधामा नरेश श्रेष्ठले खिंचेको तस्बिर पहिलो भयो । त्यस्तै ‘न्य...
बाँकेका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी विरुद्धको तयारी
ताजा खबर नेपालगञ्ज १४ साउन । बाँकेका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न महामारीवाट बच्न सम्वद्धहरुले पूर्व तयारी थालेका छन् । संक्रमणवाट बच्न पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो । होलिया, गंगापुर, वेतहनी, मटेहिया, कचनापुर र खासकुश्मामा औषधि पठाइएको छ । औषधि आजवाट वितरण गर्न सुरु...